China azu paaki T-B3585 rụpụta na Factory | TIGERNU
TIGERNU kpochapụwo imewe azu paaki
Ikike: Nke a na laptọọpụ azu paaki size bụ 31 19 19 * 45cm (L * W * H) .Otu ha nwere onwe ha dị larịị ruru 15,6 inch. Nnukwu ogige dị na ọtụtụ obere akpa dị n'ime ụlọ maka iPad, itienna, ụlọ akụ ike, òké, igodo, ekwentị, chaja, wdg. Uwe akpa na eriri ubu na n’elu bụ maka nnweta dị mfe nke ihe a na-ejikarị eme ihe. Ime akpa gị haziri ka ị ghara ịkpụgharị gburugburu iji nweta ihe ị chọrọ.
Ihe: Azụmahịa azụmaahịa ejiji bụ nke na-enweghị ntụpọ na ncha na-eguzogide ọgwụ, na-ejide n'aka na ọ ga-adịgide adịgide iji nagide ọnọdụ siri ike ma dịkwa mfe nhicha.
Atụmatụ: Ọdụ USB dị n'èzí nke e wuru na eriri USB nwere ike iwepu ya mee ka akpaazụ USB a dị mfe iji kwụọ ekwentị gị ebe ọ bụla na-enweghị ike ịwepụ akụ gị. A na-edozi eriri akpa a kpara nke ọma maka akpa laptọọpụ na trolley nke akpa gị, na-eme njem gị na njem dị mfe karị.
Safety: Laptọọpụ akpa na a zoro ezo mgbochi-ezu ohi n'akpa uwe na azụ na-echebe gị bara uru ihe n'aka ndị ohi. Dual-oyi akwa anọ ezé gbawara-àmà zipa bụ nnọọ ihe siri ike na ndị ọzọ inogide karịa mgbaàmà oyi akwa mkpọchi uwe, ọ bụ ọbụna na-eguzogide ọgwụ mma idu, adịghị mfe abịa iche mgbe ị na-ebu ọtụtụ ihe na akpa. Enwere ike iji mkpọchi mkpọchi mkpọchi, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị gbasara izu ohi. Njem na nchekwa ọzọ.
Akpa akpa a bụ ejiji na ihe dị jụụ, zuru oke maka ndụ gị kwa ụbọchị, njem azụmaahịa, ọrụ, ụlọ akwụkwọ, ịma ụlọikwuu, ịgagharị, picnic
Nọmba nlereanya T-B3585
Agba: Nwa, Mmanya, Kọfị, Isi awọ
Mbukota: 25 PC / ctn
Nha: H44cm * L30cm * W16cm
Dabara na laptọọpụ size: Dabara maka 15.6 sentimita asatọ
Ihe: Splashproof & ọkọ-eguzogide ọgwụ 70 * 200D naịlọn
Njirimara: Ihe ntanetị; Na eriri USB; Ugboro abụọ oyi akwa mkpọchi uwe
Nke gara aga: Paaki T-B3516
Osote: Paaki T-B3599